Wepu DirectX components
DirectX - ụlọ akwụkwọ ọhụụ pụrụ iche na-enye mmekọrịta dị mma n'etiti ngwaike na ngwanrọ nke usoro ahụ, bụ ndị nwere ọrụ maka igwu ọdịnaya ọdịnaya (egwuregwu, vidiyo, ụda) na ọrụ nke mmemme mmemme. Iwepu DirectX N'ụzọ dị mwute (ma ọ bụ nke ọma), na sistemụ arụmọrụ nke oge a, a na-arụzi akwụkwọ ndị DirectX na ndabara ma bụrụ akụkụ nke shei.
Ịkwụsị "Nweta Ngwaọrụ Wepụ Ihe Mere" njehie na egwuregwu nke oge a
Nsogbu dị iche iche na mkpọka na egwuregwu bụ ihe a na-emekarị. Ihe kpatara nsogbu ndị a dị ọtụtụ, taa, anyị ga-enyocha otu njehie nke na-ebili na ọrụ ndị a na-achọsi ike ugbu a, dịka Agha 4 na ndị ọzọ. Ọrụ DirectX "GetDeviceRemovedReason" Nke a na-esikarị na-ezute mgbe egwuregwu na-eburu ngwa ngwa kọmputa, karịsịa, kaadị vidiyo.
Ndozi nsogbu na-agba ọsọ n'okpuru DirectX 11
Ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ị na-ebupụta egwuregwu ụfọdụ na-enweta ọkwa site na usoro na ọrụ chọrọ nkwado maka DirectX 11 components. Ozi nwere ike ịdị iche, ma isi bụ otu: kaadi vidiyo anaghị akwado ụdị API a. Ebu ụzọ arụ ọrụ na DirectX 11 Components DX11 na 2009 ma ghọọ akụkụ nke Windows 7.
Idozi "Error Setup Error Otu njehie esịt" pụtara na egwuregwu
Egwuregwu niile e mere iji rụọ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Windows chọrọ ijide otu ụdị nke DirectX components maka ọrụ ha. A na-edozi ihe ndị a na OS, ma, mgbe ụfọdụ, a pụrụ "ịwapụ" na egwuregwu ịwụnye egwuregwu. Ọtụtụ mgbe, nhazi nke nkesa ndị dị otú ahụ nwere ike ịda, na ntinye ọzọ nke egwuregwu ahụ anaghị ekwe omume.
Gbanwee nsogbu na DirectX na mbu
Mgbe na-agba ọsọ ụfọdụ egwuregwu na kọmputa Windows, njehie nwere ike ime na ngwa DirectX. Nke a bụ n'ihi ọtụtụ ihe ndị anyị ga-atụle n'isiokwu a. Na mgbakwunye, anyị na-enyocha ngwọta maka nsogbu dị otú ahụ. Nzọụkwụ DirectX na egwuregwu Nsogbu kachasị mkpa na DX components bụ ndị ọrụ na-agbalị ịme egwuregwu ochie na ngwaike nke oge a na os.
Esi tinye DX11 na Windows
Fọrọ nke nta ka egwuregwu niile maka Windows na-eji DirectX. Ụlọ akwụkwọ ndị a na-ekwe ka iji kaadị vidiyo na-arụ ọrụ nke ọma, ma, dịka nsonaazụ ya, na -emepụta ihe osise dị mgbagwoju anya dị elu. Dika ihe ngosi nka na-abawanye, ya mere mee ike ha.
Kedu ihe bụ DirectX na otu esi arụ ya
Mgbe ị na-elele àgwà nke kaadị vidiyo, anyị na-eche ụdị ihe ahụ dịka "DirectX nkwado". Ka anyị lee ihe ọ bụ na ihe mere ị chọrọ DX. Hụkwa: Otu esi hụ àgwà nke kaadị vidiyo Gịnị bụ DirectX DirectX - otu ngwaọrụ (ụlọ akwụkwọ) nke na-ekwe ka mmemme, tumadi egwuregwu kọmputa, iji nweta nnweta ngwanrọ nke kaadị vidiyo.
DirectX bụ nchịkọta nke ụlọ akwụkwọ dị iche iche nke na-enye ohere ka egwuregwu "kọọrọ" ozugbo na kaadị vidiyo na usoro ihe egwu. Ihe egwuregwu na-eji ihe ndị a eme ihe n'ụzọ dị irè na-eji ike ngwaike nke kọmputa. Imelite onwe ha nke DirectX nwere ike ịchọrọ n'ọnọdụ ndị njehie na-eme mgbe a na-akpaghị aka, egwuregwu ahụ "na-aṅụ iyi" maka enweghị faịlụ ụfọdụ, ma ọ bụ na ịchọrọ iji ụdị ọhụrụ.
Njehie nhiehie "Njehie njehie nke DirectX"
Njehie mgbe ịmalite egwuregwu na-adabere n'ihi enweghị nkwekọrịta nke nsụgharị dị iche iche nke components ma ọ bụ enweghị nkwado maka nyochaa dị mkpa nke akụkụ ngwaike (kaadị vidiyo). Otu n'ime ha bụ "Ndenye ngwa-ngwa njehie DirectX" na ọ bụ maka ya ka a ga-atụle n'isiokwu a. "Njehie njehie DirectX" njehie na egwuregwu Nsogbu a na-emekarị n'ọsọ site na Electronic Arts, dịka Agha 3 na Mkpa maka Speed: The Run, karịsịa n'oge nchịkọta egwuregwu ụwa.
Ejiri DirectX mee ihe na Windows 7
DirectX - components pụrụ iche nke na-ekwe ka mmemme na mmemme mmemme rụọ ọrụ na sistemụ arụmọrụ Windows. Ụkpụrụ nke ọrụ nke DX dabeere na ntinye nke ngwanrọ na-enweta ihe ngwaike kọmputa, na kpọmkwem kpọmkwem, na ihe ndị na-ese onyinyo (kaadị vidiyo). Nke a na-enye gị ohere iji ohere zuru ezu nke ntaneti vidiyo iji nye onyinyo ahụ.
Ngwa ntanetị Windows iji chọpụta DirectX
Ngwa DirectX Diagnostic Tool bụ obere ọrụ ntanetị Windows nke na-enye ihe ọmụma banyere components multimedia - ngwaike na ọkwọ ụgbọala. Tụkwasị na nke a, usoro a na-enyocha usoro maka ngwanrọ nke ngwanrọ na ngwaike, ọtụtụ njehie na malfunctions. N'ihe banyere DX Diagnostic Ngwaọrụ N'okpuru ebe a, anyị na-eme njem nlegharị anya nke taabụ nke usoro ihe omume ma nyochaa ozi ọ na-enye anyị.
Ịhazi nghazi DirectX na Windows
Anyị nile, site na iji kọmputa, chọrọ 'ịpị' ọsọ ọsọ ya. A na-eme nke a site na overclocking ndị isi na ndị na-ese ihe nkiri, RAM, wdg. Ọ dị ka ọtụtụ ndị ọrụ na nke a ezughị, ha na-achọkwa ụzọ isi melite arụmọrụ egwuregwu site na iji tweaks software.
Njehie usoro nke ntinye DirectX
Ọtụtụ ndị ọrụ mgbe ị na-agbalị ịnwụnye ma ọ bụ melite components DirectX na-eche na enweghị ike ịwụnye ngwugwu ahụ. Ọtụtụ mgbe, nsogbu dị otú a chọrọ mkpochapụ ozugbo, ebe egwuregwu na ihe omume ndị ọzọ na-eji DX jụ ịrụ ọrụ ọ bụla. Tụlee ihe kpatara na ngwọta nke njehie mgbe ị na-etinye DirectX.
Chọpụta version nke DirectX na Windows 7
DirectX - usoro setịpụrụ ngwaọrụ maka Windows, nke, n'ọtụtụ ọnọdụ, na-eji mee egwuregwu na ọdịnaya ndị ọzọ multimedia. Maka ọrụ zuru ezu nke ngwa na-eji akwụkwọ ọgụgụ DirectX, ọ dị mkpa ịnweta ndị ọhụrụ dịka akụkụ nke sistemụ arụmọrụ. N'ụzọ bụ isi, a na-arụnye ngwugwu ahụ na-akpaghị aka mgbe ị na-etinye Windows.
Njehie "Emezughị ịmalitepụta DirectX" na ngwọta ya
Njehie na egwuregwu nke DirectX na-ata ụta n'ihi na ọ bụ nkịtị. Nzuzo, egwuregwu ahụ chọrọ nyocha ụfọdụ nke components, nke sistemụ arụmọrụ ma ọ bụ kaadị vidiyo anaghị akwado. Otu n'ime njehie ndị a ga-atụle n'isiokwu a. Emezughị ịmalitezie DirectX Njehie a na-agwa anyị na ọ gaghị ekwe omume ịmalite usoro nke DirectX.
Kpebisie ike ma kaadị vidiyo na-akwado DirectX 11
Ọrụ nkịtị nke egwuregwu na mmemme nke oge a na-arụ ọrụ na 3D ndị na-ese onyinyo pụtara nnweta nke ọhụrụ mbipụta DirectX nke arụnyere na usoro. N'otu oge ahụ, arụ ọrụ zuru oke nke components anaghị ekwe omume n'enweghị nkwado ngwaike nke mbipụta ndị a. N'okwu a taa, ka anyị lelee anya iji chọpụta ma kaadị eserese na-akwado DirectX 11 ma ọ bụ nsụgharị ọhụrụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Directx 2020